Maitiro Ekunyora Podcast Kubvunzana paSkype | Martech Zone
Isu tave nemaviri emaExpert Bvunzurudzo akateedzana Podcast yedu uye yaenda zvisingaite mushe. Tatova nazvo Kumucheto kweWebhu Radio kunova kubudirira uye kwakaitwa mukubatana nevamwe vedu kuSite Strategics. Dzimwe nguva, zvakadaro, isu taida kutora kunyura kwakadzika chaizvo ne nyanzvi nepo EdgeTalk inotarisa pane musoro.
Nenyanzvi munyika dzese, zvinoita zvisingaite kuyera purogiramu yemunhu wese kuti apinde mu studio yekubvunzurudzwa, hazvo! Takasarudza nzira yakanakisa yekuita izvi yaive yekuita yeprojekti yepadivi uye kushandisa Skype neGarage bhandi kuzvidhonza zvese pamwechete. Isu takanyorera rubatsiro rwemupiyona Brad Shoemaker kubva Yakasikwa Zombie Studios kuvaka kwedu kushambadzira, intros uye kunze. Brad akatoshandisa bhendi reshamwari yangu yepamwoyo, Joinha Vakafa, mumashure mumhanzi!
Isu takazoedza nzira dzakawanda dzekurekodha uye takaona kuti kurekodha Skype kufona ndiyo yaive nzira iri nyore. Takawana Fonera sahwira ye Skype kubva kuEcamm yaive nzvimbo pane imwe-nguva mubhadharo we $ 29.95! Iyo rekodhi inoputika uye inotanga otomatiki neese mafoni - kurekodha zvese vhidhiyo uye odhiyo. Saka - kana iwe waida, iwe unogona kuita kubvunzurudzwa kwevhidhiyo nenzira iyi futi!
Isu takaedzawo toni yemakrofoni uye iyo yakapusa uye inoshanda kwazvo setup yatakawana iri kungoshandisa iyo Logitech ClearChat Nyaradzo / USB Headset. Zvinotaridza pese pandinenge ndiine odhiyo ichibuda mumatauri ekuratidzira, zvinokanganisa kurekodha saka ndinongoshandisa mahedhifoni.
Nhanho inotevera ndeyokudhonza kurekodha muGarageband. Ini ndinongodhonzera iyo faira mutraki uye ndobva ndatsvaga odhiyo yese yandinoda kubvisa nekuparadzanisa iyo track kumusoro uye kudzima zvisina basa ruzha. Ini ndinobva ndapinza yedu yekutanga odhiyo, kushambadza, uye kunze. Ini ndinopatsanura matraki kwandinoda kuti ma ads aende uye ndodhonza roga roga ruzha munzira yega yega kuti ifukidzane zvakanaka nemumwe.
Nekuda kwenzvimbo yakafara yekunyorera yatakavakira pairi BlogTalkRadio, isu tinogamuchira uye tinosimudzira yedu podcast ipapo uye nekuigovera kuburikidza iTunes, Stitcher, uye dzinoverengeka dzimwe nzvimbo. BlogTalkRadio ine yayo studio asi iri chaiyo-nguva, live rekodhi isina nzira yekugadzirisa nyaya netsiva. Isu takaparadza akawanda podcast kuyedza kuzviita zvirarame!
Drew Burns Bvunzurudzo
Scott Brinker Kubvunzana
Imwe tsamba pane izvi - pese pandinenge ndichiita sekunaka pane izvi muGarageBand, ivo vanoshandura iyo interface uye nzira. Anondifambisa nzungu!
Izvi zvakanaka zvakakwana izvozvi. Ini naBrad tiri kutarisa kune ramangwana kwatinogona kuunza mimwe michina panzvimbo uye pazviitiko - uye Brad anogona kusanganisa odhiyo uye nekuona matanho akakodzera ari kure kubva ku studio yake. Chichava chidiki chekudyara, asi chinotipa studio inotakurika yatinogona kushandisa chero kupi - kubva kuhofisi yedu kana kubva kune imwe nzvimbo yemusangano. Chero bedzi tine bandwidth, isu tinokwanisa kuisa pamwechete nyanzvi podcast.
Tags: brad shoemakerbhajetiyekugadzira zombie studioecamm networkbhandi regarajiKushambadzira Podcastsanganisa podcastpodcast kubvunzurudzwarekodhi podcastrekodhi skyperekodhi skype bvunzurudzoskype rekodhiskype kutsikisa